Masar oo dadaal ugu jirto xoojinta xiriirka ganacsi ay Ethiopia la leedahay – SBC
Masar oo dadaal ugu jirto xoojinta xiriirka ganacsi ay Ethiopia la leedahay
Cairo:-Raiisal wasaaraha Masar Cisaam Sharaf ayaa soo bandhigay xoojinta xiriir ganacsi uu dalkiisu la yeesho dalka Ethiopia taasi oo uu ku tilmaamay in ay jawi cusub u horseedi doonto xiriirka mugdi ku jira ee kadhashay arrimta ku aadan qeybsiga biyaha webiga Niilka.
Masar ayaa khilaaf kala dhexeeyey dalalka uu maro webiga Niilka xilligii madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Xusni Mubaarak , taasi oo salka ku haysay dalalkaasi oo doonayey in isbedel lagu sameeyo heshiiskii 1929 ee ku aadanaa isticmaalka biyaha niilka kaasi oo dalka Masar u ogolanaya in ay yeelato saamiga ugu balaaran biyaha webiga Niilka.
Dawladda Masar ayaa tibaaxday in ay qaadayso tallaabada iyada la gudboon, si ay u ilaashato danaheeda.
Dawladda Itoobiya ayaa waxay ku eedaynaysaa Dawladda Masar inay ka caga-jiidayso meel-marinta qorshihi ku saabsanaa habka kala qaybsiga Biyaha Webiga? weyn ee Niil.
Bartamihii sanadkoo la soo dhaafay ayaa waxaa heshiis biyaha Webiga ku saabsan kala saxiixday Dawladaha Itoobiya, Uganda, Burundi, Kenya, Conga Democratic ,Rwanda iyo Tanzania, laakin Suudaan iyo Masar oo iyagu ah dalalka biyaha badankiis isticmaala ayaa ku gacan seeray heshiiskaas.